LEGO ခရစ်စမတ် ၂၀၂၁ ကတ်တလောက်အသစ်ကိုပြသည် Marvel အစုံ
22 / 09 / 2021 22 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 351 Views စာ 1 မှတ်ချက် 42131 CAT D11T ဘူဒိုဇာ, 76184 Spider-Man Mysterio's Drone Attack vs., 76185 Spider-Man အဆိုပါ Sanctum အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ, 76195 Spider-Man's Drone Duel, ၇၆၂၃၉ Batmobile Tumbler Scarecrow Showdown, 76240 Batmobile Tumbler, Batman, City, Creator Expert, Ideas, Lego, Lego Batman, Lego CIty, Lego City စတန့်, Lego Creator Expert, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego Ideas, Lego မှ marvel, Lego Spider-Man, Lego Star Wars, Lego Technic, Marvel, Spider-Man, Star Wars, နည်းပညာ, The Dark Knight ဟာ, အဆိုပါ LEGO Group
ပထမဆုံး Lego ၂၀၂၁ ခုနှစ်ခရစ်စမတ်ကတ်ပြားသည်ယခုအခါတောရိုင်း၌ရှိသည်၊ ၎င်းအားလုံးကိုပြသသည် အသစ်အစုံ ဒီနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာလာမယ်။
ကောင်းပြီ၊ သူတို့အားလုံးမဟုတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် 75313 ကို AT-AT, ၁၀၂၉၄ တိုက်တန်းနစ် နှင့် ၂၁၃၃၀ တစ်ယောက်တည်းအိမ် ကံမကောင်းစွာဖြင့်ပြသခွင့်မရှိပေ၊ သို့သော်အောက်တိုဘာလအထိအတည်ပြုထားသောအစုတိုင်းသည်လက်ခံရရှိပြီးဓာတ်ပုံရိုက်သောကတ်တလောက်တွင်ပြသသည်။ Promobricks.
၎င်းတွင်လာမည့်လ၏အသစ်သုံးပုဒ်ပါဝင်သည် Spider-Man: မည်သည့်နည်းနှင့်မျှအိမ်မှဝင်ခွင့်မရှိပါ 76184 Spider-Man Mysterio's Drone Attack vs., 76185 Spider-Man အဆိုပါ Sanctum အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ နှင့် 76195 Spider-Man's Drone Duel; Batmobiles အသစ်နှစ်ခုလုံး ၇၆၂၃၉ Batmobile Tumbler: Scarecrow Showdown နှင့် 76240 Batmobile Tumbler; အသစ် Lego CITY Stuntz အကွာအဝေး; နှင့် 42131 CAT D11T ဘူဒိုဇာ.
အဲဒီ့အကန့်တွေအားလုံးကပိုကြီးတဲ့ Tumbler ကိုအောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့မှာဖြန့်ချိလိမ့်မယ် BatmanDark Knight trilogy မှ superpersized စီးနင်းခြင်းကိုနိုဝင်ဘာ ၁ ရက်တွင်ပြုလုပ်မည်
သင်ကိုယ်တိုင်ခရစ်စမတ် ၂၀၂၁ ကတ်တလောက်ကိုသင်မိတ္တူ (အကယ်၍ မင်းစာအုပ်ဟောင်းတွေကိုလှန်ကြည့်တာထူးဆန်းတာ၊ လွမ်းဆွတ်စရာပျော်ရွှင်မှုရှိသလား) အဲဒါကမင်းရဲ့ဒေသဟုတ်မဟုတ်စစ်ကြည့်ဖို့ဘဲ။ Lego စတိုး ရရှိနိုင်ပါပြီ။ ယခုဂျာမနီနိုင်ငံ၌တောရိုင်း၌၎င်း၊ အခြားစျေးကွက်များတွင်မကြာမီပြသနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သည်။
← LEGO သည် ၂၀၂၂ တွင်စျေးနှုန်းမြင့်တက်ခြင်းကိုတုံ့ပြန်ခဲ့သည်
LEGO သည်စာအုပ်များပေါ် အခြေခံ၍ Harry Potter အတွဲများအတွက်တောင်းဆိုချက်များကိုတုံ့ပြန်သည် →
တစ်ခုမှာ "LEGO Christmas 2021 catalog သည်ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်အသစ်အသစ်များကိုပြသည်"
Lego ကဒီ show ကိုလမ်းမှာရဖို့လိုတယ်။
ငါတကယ်ပဲ start၎င်းသည်အစစ်အမှန်ဖြစ်သည်ကိုသံသယ ၀ င်သည်။